835 June 9, 2017
1291 June 1, 2017
DVB BizDebate – ဘဏ်အတိုးနှုန်းတွေ လျှော့ချလို့ရမလား? “ဘဏ်လုပ်ငန်းက သီးခြားခွဲထက် တဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ ပြည်သူလူထုဆီ တိုးတိုးပြီးသွားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဘဏ် လုပ် ငန်းတွေ ဟာ အများပြည်သူနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့လုပ်ငန်း မျိုးဖြစ်နေပါတယ် ။ငွေရေးကြေးရေးလည် ပတ်နေတဲ့သူတွေ ကုန်သွယ်မှုပိုင်း ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေ အစိုးရလုပ်ငန်းတွေနဲ့တိုက်ရိုက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေ ဒီလိုလူတန်းစားတချို့အတွက်သာ ဘဏ်တွေဟာ ဆက်သွယ်တဲ့နေရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ နောက်တချက်က ဘဏ်က ငါတို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာပါလားဆိုတဲ့ အသိဟာ တကယ်တမ်း အခုအချိန်ထိ မပြောင်းလဲသေးပါဘူး” – ဦးခိုင်ထွေး (director, Myanmar Farmer Choice Co.,ltd) “စီးပွားရေးလုပ် ငန်းရှင်တွေကတော့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင် ဖို့ဆိုတာဟာ အရင်းအနှီးရဖို့ ချေးငွေရဖို့။ ထိုင်း နိုင်ငံနဲ့စင်္ကာပူနိုင်ငံတွေရဲ့ ချေးငွေက ၃ရာခိုင်နှုန်းအောက်ဘဲရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက ၁၃ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ ဒီကနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အတိုးနှုန်းကို …Read more »
1313 May 20, 2017
DVB BizDebate – ငြိမ်းချမ်းရေး ရမှ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာလား? “စီးပွားရေးတိုးတက်ရင်ကော ငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်မလား။ အန်ကယ့်အမြင်ပေါ့နော်။ စီးပွားရေးတိုးတက်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရနိုင်ပါတယ်။ အခုနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဆုတ်ယုတ်နေတယ်။ ဆုတ်ယုတ်နေတော့ ပြည်နယ်ကငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့အဖွဲ့ တွေက တိုးတက်မှုမရှိဘူး။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုက ညီညီမျှမျှနဲ့သာတိုးတက်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးရပါလိမ့်မယ်။ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် အောင်လုပ်ရင်းနဲ့ဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လုပ်ရမယ်။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးသာ တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကလွယ်ကူသွားလိမ့်မယ်” – ဦးကျော်ဇေယျ(အတွင်းရေးမှူး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရေး စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးကော်မတီ) “ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကို မြေပုံပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် သဘာဝသံယံဇာတနဲ့ အများကြီး ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအနေအထားကိုက သံယံဇာတ အပေါ်မှာမှီခိုနေရတယ်။ အစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးက သံယံဇာတကရတာဖြစ် တယ်။ ဒီတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးမရသေးဘဲနဲ့ သံယံဇာတခွဲဝေမှုမညီမျှမှု ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့က သံယံဇာတနဲ့ပတ်သတ်ပြီးသွားလုပ်မယ်ဆိုရင် ရှိရင်းစွဲမကျေနပ်မှုတွေကို ပိုပြီးတော့ …Read more »
လက်ရှိ အခွန်စနစ် က မျှတမှုရှိရဲ့လား ?
1405 May 4, 2017
DVB BizDebate – လက်ရှိ အခွန်စနစ် က မျှတမှုရှိရဲ့လား ? “အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိစ္စ ဒါတွေက ဥပဒေထဲမှာရှိပြီးသား။ ဒါလုပ်မယ် ဆိုရင် ဥပဒေထဲမှာ ဒဏ်ဘယ်လိုပေးမယ်၊ ပေးတဲ့သူ ကော ယူတဲ့သူကော အကုန်ပါပြီးသား။ ဒါပေမယ့် ဥပဒေကို တော်တော် များများက မသိကြသေးဘူး” – ဦးမိုးကျော်(Managing Partner, Win Tin & Associates) “အခွန်ကောက်ခံတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက အရေးကြီးတာပေါ့နော်။ အဲတော့ အခွန်နဲ့ပတ်သတ်လို့ ဝန်ထမ်းတွေက အတွေ့အကြုံ မရှိဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အခွန်ဥပဒေက အရမ်းရှုပ်ထွေး များပြားတာကြောင့် ဒါတွေကို သူတို့အနေနဲ့ သေသေချာချာကြေညက်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် လုပ်ငန်းက တွင်ကျယ်လာမှာမဟုတ်ဘူး” – ဒေါ်တင်နွယ်ဦး (ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း) “အခွန်ကောက်ခံတဲ့သူနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေအကြားမှာ …Read more »
DVB TV – “အလုပ်သမားတွေ ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ် ရရဲ့လား”
1304 April 30, 2017
DVB TV – “အလုပ်သမားတွေ ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ် ရရဲ့လား” “လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် မန်နေဂျာတွေ၊ ဘာသာပြန်သူတွေရဲ့ အလုပ်ရှင်တွေကို ဥပဒေအကြောင်း ဘာသာပြန်မှုအပိုင်း နားလည်မှုအပိုင်းတွေမှာလည်း အားနည်းချက်တွေရှိတယ်။ ဥပဒေတွေထဲမှာ ‘၁’ လို့ရေးထားရင် အလုပ်ရှင်က ‘ပ’ လို့ထင်ပြီး အလုပ်သမားဘက်က ‘ဂ’ လို့ မြင်နေကြတဲ့ ပြဿနာ” ဦးလှဘုန်းအောင် – လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကျွမ်းကျင်သူ “လုပ်သက်ခွင့်၊ ရှောင်တခင်ခွင့်၊ ဆေးခွင့်ဆိုတဲ့ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေ မသိတဲ့ စက်ရုံတွေ အများကြီးပါ။ အလုပ်သမားကို အလုပ်ဖြုတ်ရင်တော့ ဥပဒေတွေက အသက်ဝင်နေပြီး အလုပ်သမားကို အကာအကွယ်ပေးဖို့တော့ ဥပဒေတွေက စာရွက်ပေါ်မှာပဲ ရှိနေတယ်” ကိုနေလင်းဦး – အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် “၂၀၁၆ ကနေ ၂၀၁၇ လ အစပိုင်းထိ အငြင်းပွားမှုပြဿနာတွေမှာ …Read more »
သစ်တောပြုန်းတီးမှု က စီးပွားရေးကို ဘယ်လောက်ထိခိုက်နေလဲ?
997 April 27, 2017
စီးပွားရေးဒီဘိတ် – သစ်တောပြုန်းတီးမှု က စီးပွားရေးကို ဘယ်လောက်ထိခိုက်နေလဲ? “သစ်တောတွေပြုန်းတီးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ အချက် ၂ ချက်ဘဲရှိတယ်။ လူတွေကြောင့် ပျက်စီးတာနဲ့ နောက်တချက်က ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် သဘာဝကြောင့် ပျက်စီးတာပါ” – ဦးစောကြည်လင်း (ကရင်ပြည်နယ်သစ်တောဝန်ကြီးဟောင်း) “မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိအနေအထားအရ သစ်တောဧရိယာ ဟက်တာ သန်း ၃၀ နီးပါးရှိပါတယ်။ ဒါက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ မြေဧရိယာနဲ့အတူတူဘဲ။ ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဧရိယာကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ဖို့လိုပါတယ်” – ဦးဘိုနီ (ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သစ်တောဦးစီးဌာန) – “အများအားဖြင့်လက်ခံတာက နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေထုတ်တယ်ဆိုရင် ဒါက တရားဝင်သစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ တကယ်တမ်း ကျတော့ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ မပြည့်စုံဘူးဆိုရင် အစိုးရဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းက ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့က …Read more »
DVB TV – “တရားမ၀င် လောင်းကစားနည်းလမ်းတွေကို ဘယ်လိုတားဆီးမလဲ?”
1434 April 23, 2017
DVB TV – “တရားမ၀င် လောင်းကစားနည်းလမ်းတွေကို ဘယ်လိုတားဆီးမလဲ?” “ငြိမ်းချမ်းရေး ၀င်လာသူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းနေကြလဲ? ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စတို့ လောင်းကစားဝိုင်းထောင်ပြီး ဖြေရှင်းခိုင်းတာတို့ ရှိနေလားဆိုတာတွေ စဉ်းစားစရာတော့ ရှိတယ်” မန်းအောင်ပြည်စိုး – ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ “တချို့ကိစ္စတွေက ကိုင်တွယ်ရတာ အင်မတန် နူးညံ့မှရပါတယ်. တချို့အဖွဲ့တွေနဲ့က ထိပ်တိုက်တွေ့လို့မရပါဘူး” စောယှား(ရှား)ဖောင်အွာ – အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၁၂ ကရင်ပြည်နယ် “ငြိမ်းချမ်းရေး ၀င်လာသူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းနေကြလဲ? ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စတို့ လောင်းကစားဝိုင်းထောင်ပြီး ဖြေရှင်းခိုင်းတာတို့ ရှိနေလားဆိုတာတွေ စဉ်းစားစရာတော့ ရှိတယ်” မန်းအောင်ပြည်စိုး – ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
DVB TV – “မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်ကို ဘယ်လို မြှင့်တင်ကြမလဲ”
1101 April 16, 2017
DVB TV – “မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်ကို ဘယ်လို မြှင့်တင်ကြမလဲ” “မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်ကို မြှင့်တင်ဖို့က ဒုတိယအပိုင်း၊ အောက်ဆက်မကျအောင် အရင် ဖမ်းဆွဲထားရမှာ. အဲဒါအရင်လုပ်ရမှာ အောက်ကျနေတဲ့ အရှိန်တန့်သွားမှ ဆွဲတင်လို့ရမှာ. သေချာတာကတော့ အောက်ကျနေတာအမှန်ပဲ” ချစ်ဦးညို – စာရေးဆရာ/ပြဇာတ်ရေးဆရာ “ပရိသတ်က သူတို့အပေါ်သာ မညာနဲ့ ဥပမာ အော်ပရာဆိုလည်း အော်ပရာ၊ ပြဇာတ်ဆိုလည်း ပြဇာတ်ပေါ့။ ဟိုတုန်းကဆို ယောကျာင်္းကောင်းတို့ မျက်ရည်၊ နှင်းကေသရာချစ်တဲ့သူရဲကောင်း အဲဒါတွေကို တကယ့် ဆက်တင်တွေနဲ့ အဲ့ခေတ်မှာ မှတ်သားလောက်တဲ့ ပရိသတ်ကို ပေးစရာ မက်ဆေ့ခ်ျတွေပါတဲ့အတွက် ကြည့်လိုက်ရတာ တကယ့်ကို ဆက်တင်အခမ်းအနားတွေနဲ့လေ” ဦးနန်းဝင်း – အတွင်းရေးမှူး၊ သဘင်ဖောင်ဒေးရှင်း